Duraka Kura दुराका कुरा: February 2017
नयाँ जमानाको उखान
सामाजिक सञ्जाल । सूचना र भावना आदानप्रदान गर्ने माध्यम । पहिले रोदीघर, मेलापात, चौतारी, देउराली र भञ्ज्याङका बिसौनीमा खबर र भावना साटसाट हुन्थे । अहिले सामाजिक सञ्जालले त्यसको ठाउँ लिएको छ । ‘फेसबुक’ लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुने तस्बिर, कमेन्ट, टीका–टिप्पणी, एवम् माया–मोहब्बतका मसलेदार कुराले साथीसँगीसँगको भेटघाटमा कुराको कोसेली जुटाइदिएको छ ।
मलाई पनि यो भेटघाटमा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका उखानबारे कुरा गर्न मन लाग्यो । अहिलेका उखानहरूले परिवर्तनशील समयको भाका टिपेका छन् । हिजोका उखानहरू आज नयाँ रूपरङमा ‘रिमोडलिङ’ र ‘रिकण्डिसनिङ’ भएर देखापरेका छन् । ती उखान स्वच्छन्द र बेफिक्री छन्, जो धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गिक समानता एवम् महिला अधिकारका आवाजहरूप्रति एक हिसाबले बेखबर देखिन्छन् ।
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले नेपालीजनको हाँसो–खुसी लुट्यो । खुसी लुटिएको त्यो पीडादायी पलले धेरैलाई भगवानको नाम पुकार्न बाध्य बनायो । त्यही समयमा भगवानको नाम जोडिएको उखान आयो, ‘बाह्र वर्षसम्म बाइबल पढ्यो, भूइँचालो आउँदा रामराम’ । यो उखान चिटिक्क परेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि यसमा एउटा खोट देखिन्छ । यसले धर्मान्तरितहरूप्रति पूर्वाग्राहपूर्ण व्यङ्ग्योक्तिको छेडेको प्रष्टै भेटिन्छ ।
नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी गर्यो, जसले नेपाली जनजीवनमा बिपत्ति निम्त्याइदियो । नाकाबन्दीपछि नेपालीजनले भोगेका हैरानीको पृष्ठभूमिमा थरीथरीका उखानहरू देखापरे । जस्तै : ‘नाकाबन्दीको चोट नेतालाई के थाहा ?’, ‘कामकुरो एकतिर सिलिण्डर बोकी लाइनतिर’, ‘नहुनु ग्याँसभन्दा मक्किएको दाउरा जाती’, ‘ट््याङ्कभरि तेल आयो, हर्ष न विस्मात’ आदि । ‘रिमोडलिङ’ गरिएका यी उखानले हाम्रा राजनीतिक र सामाजिक वास्तविकताहरूलाई गहिरोसँग आत्मसात गरेका छन् ।
हाम्रा कतिपय उखान नारी–अस्मिता र प्रतिष्ठालाई ठाडै चुनौती दिने खालका छन् । यो क्रम नयाँ जमानाको नयाँ उखानमा पनि रोकिएको छैन । महिला अधिकारका कुरा जति नै उर्लिए पनि पुरानो जमानाको नकारात्मक विरासत कायमै छ । नयाँ संस्करणमा आएका उखानले पनि पुरानै राग अलापेको देखिन्छ । एउटा दृष्टान्त : ‘आमा पनि ब्युटी छोरी पनि ब्युटी, बाउले गर्नुपर्ने चुलाको ड्युटी’ ।
पुँजीवादले चारैतिरबाट घेरेको छ । शहरका कतिपय घरमा ‘मनी प्लान्ट संस्कृति’ मौलाएको छ । मनी प्लान्टमा दिनदिनै पानी खन्याउँदै आर्थिक वैभवको कामना गर्ने परम्परा बसिसकेको छ । यसलाई बेठीक भन्न सकिन्न । तर खरेडीले आफ्नै भाइबन्धुको अन्नबाली सुक्दा कुनै पीडाभाव नझल्काउनेहरूका प्रवृत्तिलाई चाहिँ सही भन्न सकिन्न होला । जनसामान्यको पीरमर्काप्रति बेखबर बनी मनी प्लान्टमा एकोहोरो जलसिंचन गर्नेहरूप्रति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू बेपत्ता रुखो देखियो : ‘खरेडीले मकै सुक्यो, मनी प्लान्ट लाई पानी’ ।
तन्नेरीहरूको कुरै बेग्लै । आफूले मन खाएको मनप्यारीले अर्कै व्यक्ति (त्यसमा पनि आफूभन्दा बढी उमेर खाएका) लाई मन पराएपछि उनीहरूको रीसको पारो चढ्ने नै भयो । त्यही झोंक तन्नेरहरू पुरानो उखानलाई ‘रिमोडलिङ’ गरेर भयानक उखरमाउलो उखान रच्न पुग्छन् । उखान यस्तो छ : ‘आफू ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो, आफू ताक्छु तरुनी, तरुनी ताक्छ बुढो’ ।
समाजको एउटा वृत्तमा चम्चागिरी मौलाएको र त्यसले उद्योगकै रूप लिइराखेको चर्चा सुनिन्छ । यदाकदा व्यवहारमा पनि यस्तै देखिन्छ । विद्या आर्जनमा विश्वास नगर्ने तर चम्चागिरीलाई उच्च महत्व दिने । यही प्रवृत्तिमाथि व्यङग्य कस्न सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू पछि परेका छैनन् । उनीहरू उखानमार्फत व्यङग्य गर्छन्, ‘पढीलेखी छैन काम, चम्चागिरी गरी खायो माम’ ।
नेपाली समाजमा विदेशी पहिरन (टाई) जीवनशैलीको हिस्सा बन्दै गएको तथ्य जगजाहेर नै छ । अब टाई हाम्रो घाँटीमा मात्र झुण्डिएन, उखानको रचनागर्भमा पनि छिरिसक्यो । पुराना बनिबनाउ उखानमा टाई शब्द घुसेर आउन थाले । ती उखान घतलाग्दै छन् : ‘बाँदरको पुच्छर, टाई न इजार’, ‘खाई न पाई, दौरामाथि टाई’ ।
समाजमा धेरै आलोचित वर्गमध्ये नेताहरू अग्रपंक्तिमै पर्छन् । समाजमा नेताप्रति वितृष्णाको बेलाबखतमा घनघोर वर्षा हुन्छ । हाम्रो देशमा मात्रै यस्तो हुन्छ कि अरु देशमा पनि यस्तै हुन्छ, मलाई थाहा छैन । देशको समग्र नीति र थिति हाँक्ने नेतागणमाथि आलोचना हुने क्रम जारी नै छ । यही वास्तविकतालाई दर्साउने एउटा उखान : ‘जुत्ताको माला लगाएको नेता छाला देखी तर्सन्छ’ ।
सबैलाई जिन्दगी प्यारो छ । तन्नेरीहरूलाई बाइक झनै प्यारो छ । देशमा लोकतन्त्र छ । यसले दिएको स्वतन्त्रताले असंयमित किसिमको आन्दोलन मौलाएको छ । बेथितिले चलेको देशमा बेथितिकै आन्दोलन चल्नु कुन अनौठो कुरा हो र ! ? अनियन्त्रित आन्दोलनले कतिबेला आमनागरिकको जिन्दगी र तन्नेरीहरूको बाइकलाई छिन्नभिन्न पार्ने हो, कसलाई के थाहा ? सम्भावित अनिष्टलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले आजकाल सचेतनामूलक उखान आएको छ : ‘अनिकालमा लाइफ जोगाउनू, आन्दोलनमा बाइक जोगाउनू’ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका यस्ता उखानले समयक्रमसँगै हाम्रा लोकअभिव्यक्तिको स्वरूप र शैली बदलिँदैछ भन्ने संकेत गर्छन् । अहिलेका कतिपय उखान प्रगतिशील देखिन्छन् भने कतिपय कताकता पश्चगामीजस्ता पनि देखिन्छन् । ‘रिमोडलिङ’ गरिएका यी उखान सामाजिक प्रसंग र प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब बनेका छन्, जसले हामीलाई गुलावी छेण हानेझैं प्रतीत हुन्छ ।
साभार : संकल्प पोष्ट मासिक ( वर्ष १,अंक १, माघ, २०७३)
Posted by दुराका कुरा at 11:47 AM No comments:
Labels: परिमार्जित उखान
अंग्रेजी । अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा । अंग्रेजीकोे दायरा बढ्दो छ । चाहेर वा नचाहेर अंग्रेजी भाषा दैनिक सञ्चारको अपरिहार्य पाटो बन्दै गएको छ । अंग्रेजी भाषा ‘लाइब्रेरी ल्याङ्वेज’ समेत भएकोले प्राज्ञिक तथा शैक्षिक वृत्तमा यसको आयतन झनै फैलिँदो छ । बढ्दो विश्वव्यापीकरणको पृष्ठभूमिमा आमसञ्चार माध्यमले पनि अंग्रेजी भाषालाई कख्याउँदै जानुको विकल्प छैन ।
आमसञ्चार, प्रज्ञिक जगत र जनस्तरमा समेत अंग्रेजी भाषा प्रयोगको ग्राफ उकालो लाग्दो छ । अंग्रेजीबाट आयातित बौद्धिक खुराकहरूको आयतन बढ्दो छ । विदेशी समाचार अंग्रेजीमै आउँछन् । प्राज्ञिक जगतका स्तरीय पुस्तकहरू अङ्ग्रेजीमा छन् । जनस्तरमा पनि मोबाइल, नेटवर्क, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता वैज्ञानिक अविष्कारसँग सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दहरू हरेक दिन उच्चारण भइरहन्छन् । यस्ता शब्दहरूको सूची समयक्रमसँगै लम्बिँदो छ ।
अंग्रेजी भाषाको फैलिँदो आयतनबारे चर्चा गरिरहँदा सबै बुझ्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्न खोजिएको होइन । अंग्रेजीमा भएका विषयवस्तु ठूलो सङ्ख्यामा रहेका गैरअंग्रेजीभाषी समुदायले बुझ्दैनन् । उनीहरूलाई कुरा बुझाउन सम्बन्धित भाषामा अनुवाद नगरी सुखै छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, अंग्रेजीमा भएका विषयवस्तु नेपालीमा कसरी अनुवाद भएका छन् त ? यसको छोटो जवाफ छ, अनुवादसम्बन्धी मामिलाहरू प्रश्नको घेरामा छन् । साहित्यकार डा.तारानाथ शर्माले अंग्रेजीबाट शब्द ‘इस्यू’ लाई अनुवाद गर्दा झगडिया शब्द ‘मुद्दा’ बनाइयो भनेर आपत्ति जनाए । यो एउटा सानो प्रसंग हो । खोजीपस्दा अरु पनि यस्ता थुप्रै प्रसंगहरू छताछुल्ल रूपमा भेटिन्छन् ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टकी श्रीमती हिलारी क्लिन्टले सन् १९९५ मा नेपाल भ्रमण गर्दा एउटा शब्दावली निकै चर्चित रह्यो । त्यो हो, ‘प्रथम महिला’ । ‘रेडियो नेपाल’ लगायतका सञ्चार माध्यमले निकै प्रयोग गरेका उक्त शब्दावली सुनेपछि धेरैले एकआपसमा सोध्न थाले, ‘के हो, प्रथम महिला भनेको ?’ यसको उत्तर दिन धेरै सर्वसाधारण नागरिक असमर्थ थिए ।
अमेरिकी संस्कृतिमा गभर्नर वा राष्ट्रपतिको श्रीमतीलाई ‘फस्ट् लेडी’ भनिन्छ भन्ने कुरा बुझाइदिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । नेपाली सञ्चार माध्यमले ‘फस्ट लेडी’ को शब्दानुवाद गरे, तर त्यसको अर्थ खुलाएनन् । हाम्रा सञ्चार माध्यमले ‘प्रथम महिला’ नभनेर ‘अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टकी श्रीमती हिलारी क्लिन्ट’ भनिदिएको भए कुरा प्रष्ट हुने थियो । ‘प्रथम महिला’ भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । अनावश्यक रूपमा ‘फस्ट् लेडी’ को शब्दानुवाद गरेर ‘प्रथम महिला’ भनिदिँदा आमनागरिक ‘कुहिरोको काग’ बन्न पुगे ।
पश्चिमा सञ्चार माध्यमले भन्ने गरेको ‘मिडिल इस्ट’ लाई हामीले पनि ‘मध्यपूर्व’ भन्यौं । त्यो भूखण्ड पश्चिमी गोलाद्र्धका लागि ‘मध्यपूर्व’ भए पनि हाम्रो लागि ‘मध्य पश्चिम’ हो । ‘मध्य पश्चिम’ भन्न असहज लागेको हो भने ‘अरब राष्ट’ वा ‘खाडी मुलुक’ भनेरै काम चलाउन सकिन्थ्यो । स्थानगत आधारमा पनि गलत किसिमले शब्दानुवाद भएका छन् ।
त्यसैगरी, सन् १९९० को दशकमा आएको अवधारणा ‘वर्क फर फुड’ लाई ‘कामका लागि खाद्यान्न’ भनेर नेपालीकरण गरियो, जुन नितान्त गलत अनुवाद थियो । खासमा ‘खाद्यान्नका लागि काम’ भन्नुपर्ने थियो ।
अंग्रेजी शब्दको सोझो अनुवाद (‘लिटरल ट्रान्सलेसन’) गरिँदा पठनपाठनमा धेरै भ्रम पैदा भएका छन् । केही दृष्टान्तहरू :
मिडिया अनुसन्धानसम्बन्धी एउटा पुस्तकमा अंग्रेजी शब्द ‘डिस्इप्लिन्’ लाई ‘अनुशासन’ भनेर अनुवाद गरिएको छ । यसका् सोझो अर्थ ‘अनुशासन’ नै भए पनि त्यहाँ अर्कै सन्दर्भमा प्रयोग हुनुपर्दथ्यो । ‘अनुसन्धानको विधा’ को रूपमा ‘डिस्इप्लिन्’ अर्थ्याइनुपर्थ्यो । यहाँ ‘डिस्इप्लिन्’ शब्दको ‘अनुशासन’ सँग कुनै नाता छैन । यस्तो अवस्थामा यसबाट पाठकले के बुझ्ने ? ‘डिस्इप्लिन्’ शब्दको भावानुवाद गर्नुपर्नेमा शब्दानुवाद गरिँदो अनर्थ हुन पुगेको छ ।
पत्रकारितालाई मर्यादित तुल्याउने अभिप्रायले ‘अमेरिकन् सोसाइटी अफ न्युजपेपर इडिटर्स्’ (अमेरिकी समाचारपत्र सम्पादक) ले सन् १९२२ मा ‘क्यानन्स अफ जर्नलिजम्’ शीर्षकमा नैतिक निर्देशन जारी गर्‍यो ।
‘फेयर प्ले’ को आशय थियो, समाचारमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई चित्रण गर्दा उनीहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र अधिकारमा कुनै आँच आउनु दिनुहुँदैन र उनीहरूको गोप्यताको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
पत्रकारितामा समाचारको सन्दर्भमा जोडिएर आउने एउटा पारिभाषिक शब्दावली छ, ‘न्युज होल’ । यसको अर्थ हो, समाचारपत्रमा विज्ञापनका लागि ठाउँ छुट्याएर बाँकी रहेको ठाउँ – जहाँ समाचार राख्न सकिन्छ । ‘न्युज होल’ लाई शब्दानुवाद गरेर यसलाई ‘समाचार प्वाल’ भनियो । यहाँ ‘समाचार प्वाल’ शब्दावलीमात्रले कुनै अर्थ बुझाउन सक्दैन । यसले पाठक जिल्ल पर्नेबाहेक अरु केही काम गर्दैन ।
समाचारकै सन्दर्भमा आउने ‘हार्ड न्युज’ र ‘सफ्ट न्युज’ शब्दावलीलाई क्रमशः ‘कडा समाचार’ र ‘नरम समाचार’ भनेर उल्था गरिएको छ । कडापन र नरमपनसँग समाचारको कुनै साइनो छैन । ‘हार्ड न्युज’ र ‘सफ्ट न्युज’ लाई क्रमशः ‘घटनाप्रधान समाचार’ र ‘विषयप्रधान समाचार’ भनिदिएको भए कुरा प्रष्ट हुने थियो ।
अंग्रेजी शब्दको भावानुवाद हुनुपर्नेमा शब्दानुभाव हुँदा यस्ता हास्यास्पद स्थिति देखापर्छन् । एउटा संस्थाले निकालेको प्रेस अफिस व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘म्यानुअल’ मा यस्तै हास्यास्पद अवस्था आएको छ । त्यसमा प्रयोग भएका अंग्रेजी शब्दावली ‘अन द वन् ह्यान्ड’ र ‘अन द अदर ह्यान्ड’ लाई क्रमशः ‘एक हातमा’ र ‘अर्को हातमा’ अनुवाद गरिएको छ, जुन सर्वथा गलत र हास्यास्पद छ ।
आजकल कुनै वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनमा अंग्रेजी शब्द ‘अनविलिभेबल’ को हास्यास्पद किसिमले अनुवाद भएको पाइन्छ । ‘अनविलिभेबल’ शब्दको नेपालीकरण गरिएको विज्ञापनको भाषा यस्तो छ : ‘साथमा पाउनुहोस्, अविश्वसनीय गिफ्ट हाम्पर्स’ । यसको अर्थ लाग्छ, ‘विश्वास गर्न नसकिने गिफ्ट (उपहार) हरू’ । विश्वासै गर्न नसकिने गिफ्ट (उपहार) पाएर के काम ? त्यस्तो चिज त नपाएकै जाती । ‘अनविलिभेबल’ को सोझो अर्थ ‘अविश्सनीय’ भए पनि यहाँनेर यसको अर्थ फरक छ । यसलाई हास्यास्पद हुनबाट जोगाउन यसो भनिनुपथ्र्यो, ‘साथमा प्राप्त पाउनुहोस्, तपार्इँ चकित पर्ने किसिमका आकर्षक उपहारहरू ।’
शोध (‘रिसर्च’) मा प्रयोग हुने कतिपय शब्दावलीहरूको भावानुभाव हुनुपर्नेमा शब्दानुवाद गरिएका छन् । यसबाट पाठक थप अलमलमा पर्ने अवस्था छ । केही उदाहरणहरू : ‘लिटरेचर रिभ्यू’, ‘नेचरलिष्टिक अब्जभेसन्’, ‘आटिफिसल् अब्जभेसन’ आदि । यी शब्दावलीलाई क्रमश : ‘साहित्य समीक्षा’, ‘प्राकृतिक अवलोकन’ र ‘अप्राकृतिक अवलोकन’ भनेर शब्दानुवाद गरिएका छन् । केवल शब्दानुवादले यिनीहरूको अर्थ खुल्दैन । यस्ता शब्दावलीको शब्दानुवाद होइन, भावानुवाद आवश्यक छ ।
‘लिट्रेचर रिभ्यू’ को साहित्यसँग कुनै लेनादेना छैन । यसलाई ‘साहित्य समीक्षा’ भनेर उल्था गर्दा गलत हुन जान्छ । असल शोधकार्य गर्दा आफूले अनुसन्धान गर्न लागेको विषयसँग सम्बन्धित रहेर अगाडि नै अनुसन्धान गरिएका सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ ।
यस क्रममा पूर्वअनुसन्धान कार्यहरूको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन र समीक्षा गरिने भएकोले यसलाई ‘सन्दर्भ सामग्री समीक्षा’ (‘लिट्रेचर रिभ्यू’) भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । ‘साहित्य समीक्षा’ भन्दा पाठकमा भ्रम पैदा हुन जान्छ । पुस्तक प्रकाशन गर्नुभन्दा अघि व्यापक विचार विमर्श हुन पाएको भए यस्तो असहज अवस्था आउने थिएन ।
भाषा आफैंमा परिपूर्ण हुँदैन । सामाजिक अन्तरघुलनको माध्यमबाट एउटा भाषाको शब्दहरू अर्को भाषामा मिसिन पुग्छन्, जुन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपाली भाषामा पनि नेपाली राष्ट्रिय भाषाका थुप्रै शब्दहरू भित्रिएका छन् । यसले नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाएको छ । नेपाली भाषाका शब्दहरूले अंग्रेजी शब्दकोशमा प्रविष्टि पाएका छन् ।
नयाँ युगले नयाँ शब्द जन्माउँछ । उदारहणको रूपमा सन् १९९० को दशकमा इन्टरनेटको उदयसँगै पछि सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित शब्द र शब्दावलीहरू भरमार आए । तिनीहरूलाई स्थानीय भाषामा अनुवाद गर्ने कार्य लगभग असम्भव नै छ ।
विषयगत हिसाबामा इन्टनेट, सञ्चार, शोध र सामाजिक अध्ययनका तमाम आयामसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दाबली आमसञ्चार र पत्रकारिता जोडिनु स्वभाविक छ । यस्ता सबै शब्द तथा शब्दावलीहरूको शब्दानुवाद न सम्भव छ, न त व्यावहारिक नै । जबरजस्ती अनुवाद गर्दा अनर्थ हुन पुग्छ ।
अरुको आविष्कार र सांस्कृतिक उपजहरूको अनुवाद धेरै हदसम्म सम्भव छैन । अनुवाद भइहाले पनि व्याहारिक हिसाबले ग्रह्य छैन । हाम्रो छिमेकी भारतमा स्वराज आन्दोलनबाट प्रभावित भएर ‘टेलिफोन’ लाई ‘दूरभाष’, ‘टेलिभिजन’ लाई ‘दूरदर्शन’ भनेर नामकरण गरे पनि जनजिब्रोमा ती शब्दहरू ग्रह्य देखिएका छैनन् । विदेशी परिकार र उपकरणहरूको स्वदेशी भाषमा अनुवाद लगभग असम्भव छ ।
अंग्रेजी शब्दकोशमा खुकुरी, हुक्का, चपातीजस्ता शब्दहरूले प्रेमपूर्वक स्थान पाएका छन् । नेपाली जनजिब्रोमा सहजतापूर्वक झुण्डिएका रेडियो, मोबाइल, टेलिभिजन, कम्प्युटरजस्ता अंग्रेजी शब्दलाई जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
विदेशी शब्दलाई अनर्थ लाग्ने गरी अनुवाद गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी होला ? शब्दको गलत अनुवाद गरेर शब्दवह्मको दुरुपयोग गरी भ्रम बाँड्नुभन्दा आगन्तुक शब्दको मौलिक स्वरूपलाई यथावस्थामा ग्रहण गर्नु राम्रो । सुन्दा अप्रिय लागे पनि हामीले स्वीकार्नै पर्छ, सही अर्थ बुझाउने गरी अनुवाद गर्न नसक्नु आमसञ्चार र प्रज्ञिक वृत्तको कमजोरी बनेको छ ।
[साभार: अन्नपूर्ण टुडे (माघ २८, २०७३)]
Posted by दुराका कुरा at 12:39 PM No comments:
Labels: अनुवादसम्बन्धी गल्ती